NYOCHAA FAỊLỤ MAKA NJE VIRUS DỊ NA KASPERSKY VIRUSDESK - N'IHI BEGINNERS - 2019
Na nchịkọta nkenke a - otu esi eme nlele, banyere ụfọdụ njirimara nke iji na ihe ndị ọzọ nwere ike ịba uru maka onye ọrụ novice. Leekwa: Best free antivirus.
Usoro nke ịlele nje na Kaspersky VirusDesk
Usoro nkwenye ahụ adịghị enwe ihe isi ike ọbụlagodi maka onye mbido, usoro niile ahụ bụ ndị a.
Gaa na saịtị //virusdesk.kaspersky.ru
Pịa bọtịnụ nke nwere onyinyo akwụkwọ ma ọ bụ bọtịnụ "itinye faịlụ" (ma ọ bụ nanị dọrọ faịlụ ahụ ịchọrọ ịlele na ibe ahụ).
Pịa bọtịnụ "Chelee".
Chere ruo mgbe njedebe nke ego ahụ.
Mgbe nke a gasị, ị ga-enweta echiche nke Kaspersky Anti-Virus banyere faịlụ a - ọ dị mma, na-enyo enyo (ya bụ, na tiori o nwere ike ime ka omume ndị achọghị) ma ọ bụ oria.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iṅomi ọtụtụ faịlụ n'otu oge (nha ga-abụkwa karịa 50 MB), ị nwere ike ịgbakwunye ha na archive .zip, debe nje ma ọ bụ paswọọdụ nje maka archive a ma mee ka nje virus dị n'otu ụzọ (lee Otu esi etinye paswọọdụ na Archive).
Ọ bụrụ na achọrọ, ịnwere ike ibelata adres nke saịtị ọ bụla n'ọhịa (detuo njikọ ahụ na saịtị ahụ) ma pịa "Lelee" iji nweta ozi gbasara aha nke saịtị ahụ site na echiche nke Kaspersky VirusDesk.
Maka faịlụ ndị ahụrụ dịka obi site na ihe niile antiviruses, Kaspersky na-egosikwa na faịlụ ahụ bu oria ma ọ kwadoghị iji ya. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ, nsonaazụ dị iche. Dịka ọmụmaatụ, na nseta ihuenyo dị n'okpuru ebe a - nsonaazụ na Kaspersky VirusDesk otu onye na-ewu ewu, nke ị nwere ike ibudata na mberede site na ịpị bọtịnụ "Download" akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na saịtị dị iche iche.
Na nseta ihuenyo na-esonụ na-egosi ntụgharị nke ịlele otu faịlụ maka nje ndị ahụ site na iji ọrụ ntanetịime VirusTotal.
Ma ọ bụrụ na nke mbụ, onye ọrụ novice pụrụ iche na ihe niile dị n'usoro, ịnwere ike ịwụnye ya. Ihe nke abuo ga eme ka o chee echiche tupu ya eme mkpebi di otua.
N'ihi ya, na nkwanye ùgwù zuru oke (Kaspersky Anti-Virus n'ezie bụ otu n'ime ihe kachasị mma n'ime nyocha onwe onye), M ga-akwado iji VirusTotal maka nyocha vidio weebụ (nke na-ejikwa ọdụ data Kaspersky) n'ihi na inwe " echiche nke "ọtụtụ antiviruses gbasara otu faịlụ, ị nwere ike ịmatakwuo ihe nchebe ma ọ bụ enweghị nchedo ya.